ရာဘီယာသခင်မ : On sufism. | ZAYYA
ပျင်းရိမှုကို စမ်းကြည့်သော အခါ →
ယင်း ဆုတောင်းကို ကြား၍ သခင် ဖြစ်သူက နံ နက် တွင် “သူငယ်မ.. သင်ကဲ့သို့ သူတော်စင် တစ် ဦး ငါ့ အိမ် ၌ ရှိ နေ လျှင် ပင် ကောင်း ၏။ သင်သည် ဤ အိမ် ၌ သခင် အဖြစ် နေလို ကလည်း နေ နိုင်၏ ၊ မ နေ လိုလျှင်လည်း ကျွန် အဖြစ် မှ လွတ်၍ သွား လို ရာ သွား နိုင် ၏” ဆို သော် ၊ သူမလဲ ဘာဝနာ စွဲစွဲ မြဲမြဲ ပွား များ နိုင် ရန် အ တွက် ခွင့်ပန်၍ အိမ် မှ သဲ ကန္တာရ ဖက် သို့ထွက် ခွာ ခဲ့၏။ နေ့ ည ဘာဝနာ – ပွား များ ခါ ၊ ဉာဏ် အ လင်း ရ ခဲ့သည်။ သူ မ ၏ တ ရား ရှေ့ ဆောင် ပုဂ္ဂိုလ် မှာ Hazrat Hassan of Basra ဖြစ်သည်။
သူ့ တွင် အိုးခြမ်းကွဲ တစ် ခု ၊ ဖျာကြမ်း တစ်ချပ် နှင့် ခေါင်းအုံး သော ခဲ လုံး တစ်လုံး သာ ပိုင်ဆိုင်မှု ဟူ၍ ရှိခဲ့ သည်။ သူ သည် မအိပ်မနေ တရား ပြင်း ကျင့်ကြံ နေထိုင်သူ ဟု ကျော်ဇော ၏။ သူမ ကျော်ဇော လာသည် နှင့် အ မျှ ဆည်းကပ်သူများ လည်း ပေါများလှ ၏။ တရားစစ် သူ၊ တရား ဖလှယ်သူ များ ရှိသကဲ့သို့ လက်ဆက်ရန် ကမ်းလှမ်းမှု များ တွင် ဘာဆရာ မြို့စား ပင် ပါ ဝင်ခဲ့၏ ။
အရှင်အား အရှင် အဖြစ် သူ့အတိုင်း သူ ချစ်ရမည့် ချစ်ခြင်း တွင် အကြောက်နှင့် အမြှောက် မပါစေရ ဟူသော Concept of Divine Love အတွေးအခေါ်ကို ဆူဖီလောက တွင် ရဘီယာ သခင်မက စတင် ဖော်ထုတ် ခဲ့သည် ဟု ဆူဖီ လောကတွင် အသိ အမှတ် ပြုကြ ရသည်။ ဘုရား သခင် ထံတော်တွင် – အပြစ် အတွက် အာပတ်ဖြေ ဝန်ချ တောင်းပန် ခွင့်သည် – ဘုရားသခင် ထံတော် မှ ကောင်းချီး ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း ဟောပြော ပို့ချ ခဲ့၏။ မိမိ ၏ အကုသိုလ် ကို သိမြင် နောင်တ ရသူ တို့ အတွက် အခြားသူတို့ ထက် ကောင်းကင် ဘုံ တံခါး ပွင့်လွယ်သည် ဟု သင်ကြား၏။ ဘုရား သခင်၏ တပည့်တော် ကောင်း တစ်ဦးသည် ကောင်းကင် ဘုံ ကို မျှော်ခြင်း လည်းကောင်း၊ ငရဲ ကို ကြောက်ရွံ့၍ လည်းကောင်း၊ တစ်ခြား တစ်ပါးသော အစွဲ၊ အမျှော်များနှင့် သော်လည်းကောင်း ချဉ်းကပ် နေ မှု များသည် ကန့်လန့်ကာ ၏ အကွယ်မှ ချဉ်းကပ်မှု များသာ ဖြစ်၏ ဟု သင် ကြား ပေးခဲ့သည်။
ငရဲ ကို ကြောက်သော စိတ်ဖြင့် ဆည်းကပ် မိပါက ကျွန်မသည် ငရဲ၌ ခံရပါစေသား။ ဂျန္နသ်သုခဘုံ သို့ အမျှော်စိတ်ဖြင့် ဆည်းကပ် မိပါ က ကျွန်မအား ဂျန္နသ်သုခ ဘုံမှ ချန်လှပ်ထားပါ၊ အရှင့်အား အရှင့် အတိုင်းသာ ဆည်းကပ်မှု မှန်ကန်ပါမူ ကျွန်မအား ငြင်းပယ်တော် မမူ ပါနှင့် အရှင် – ဟူ၏။
ရာဘီယာ သခင်မသည် အမျိုးသမီး ဆူဖီများထဲ တွင် နာမည် အကျော်ဆုံး သူ ဖြစ်၏။ သက်တော် ၈၅ ခန့်တွင် ဂျေရုဆလင်မြို့ ၌ ကွယ်လွန် ခဲ့၏။ ကွယ်လွန်ခါ နီး ဆဲဆဲတွင် တပည့်များအား – သူမသည် အရှင့်ထံတော်တွင် အမြဲ ရှိနေမည် ဟု မိန့်မှာခဲ့သည်။ သူမ၏ အကြား အမြင် ရမှု၊ စိတ်အင်အား ကြီးမားမှု ပါးစပ်ရာဇဝင် များစွာ ရှိသော်လည်း အတွေးအမြင်နှင့် ဘဝ ဖြစ်စဉ် အကျဉ်း ကို သာ ဖော်ပြဝေငှ ရန် သင့်တော်ပါသဖြင့် ဤမျှ အကျဉ်း ဝေငှ လိုက်ပါသည်။
ဓမ္မနဒီ တွင် တင်ရှိထားသော –
အကို – U Maung Maung Ko ၏ စာ ဖြစ်ပါသည်။
One Response to ရာဘီယာသခင်မ : On sufism.
Thank for posting about her. I really interested about Sufi women.